Kudzorera Policy - hannari-shopu
Pane kunetsekana here?
Ndokumbira titumireiwo meseji kuburikidza neemail kana mutumwa PASI kuvhura nyaya. Isu tichakuudza mafambiro.
Kudzoka kwako kunogamuchirwa mukati memazuva 14 uchigashirwa.
Chinhu ichocho chinofanira kudzoserwa mumamiriro iwawo netigi yedu pachiri. Isu tinoisa iyi tegi kuti ive nechokwadi chekuti chinhu chakadzoserwa hachina kupfekwa, kana kuti hachishandurwe kubhegi rakasiyana. Isu hatizogamuchire kudzoka kana ukabvisa tag yedu muhomwe.
Kudzorera kutumira kuri pamubhadharo wako kana ukadzosera chinhu chacho nechako chikonzero.
Mushure memazuva e14 ekugamuchira, kudzoka kunozogamuchirwa chete kana: 1. Zvinoratidzwa kuva venhema nemhando yacho. Mutengi anofanira kuendesa gwaro rakanyorwa nemhando yacho. Isu tichakuudza kuti ungaitore sei. Chero gwaro nekechitatu haritorerwe segwaro rinoshanda. 2. Chinhu chacho chine kukuvara kukuru kusati kwatsanangurwa.